Ukubona ulwandle kwi-Bayside B&B - Izibuko zeGreen - I-Airbnb
Ukubona ulwandle kwi-Bayside B&B - Izibuko zeGreen
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguJudy
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uJudy iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Sisenokuba namanye amagumbi afumanekayo. Ukuba igumbi libhukishiwe, sifumane kwi-intanethi kwi-Bayside Bed and Breakfast eBareneed, NL. Kufuphi neCupids, iBrigus, iBay Roberts, iCarbonear. Ukubukela iminenga, ukunyuka intaba, igalufa xa uqhuba. Iyure eyi-1 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya iSt. John.
Sisandul 'ukufakwa kwi-Air BnB, kodwa sinemvume, sihloliwe, sine-inshorensi kwaye samkelwe yi-B&B yephondo. Ekubeni sinemvume esemthethweni, i-15% HST iqukiwe kwixabiso lakho.
Yonwabela i-B&B yokwenene kwi-Port de Grave peninsula entle, ikhaya lee-longliners zokuloba kunye neentlanzi ezimazombezombe. Ngaphandle nje kweBay Roberts, ngoko usondele kwinto onokuyidinga--uvenkile yotywala, iivenkile zokutyela, njl. Sisekude ngeyure enye ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya iSt. John 's kwaye sikumbindi weAvalon.
Ixesha lethu lonyaka liqala ngeeqhwa entwasahlobo, iminenga iye ehlotyeni, ikwindla entle nepholileyo kunye nemozulu entle. Sivulekile unyaka wonke kwaye sigcina isitovu seenkuni sihamba ebusika! Yiza ngexesha lethu elingaxakekanga (ngoNovemba ukuya kuAprili) uze ube nethuba lokukhetha kwiindawo zokutyela, ezifumaneka kwigumbi lethu lokutyela ukuze kungafuneki ukuba ushiye indawo yakho entle nezitofotofo.
Le ndlu yeyethu iGreen 's Harbour Room, ibhedi enkulu enendawo yokuhlambela esecaleni (akukho magumbi okuhlambela asetyenziswa nangabanye abantu eThe Bayside), kodwa sinamanye amagumbi afumanekayo. Fowuna nje kuphela. Elona nani likhulu lokuhlala lelabantu abadala ababini.
Igumbi lakho liquka:
Ibhedi enkulu enamashiti omqhaphu aseTurkey
URobes ngexesha lokuhlala kwakho
Ifriji encinci/amanzi asebhotileni
esineflethi Irediyo/Ialam yeAlarm
Ulawulo lobushushu lobuqu
zokotini zaseYiputa Izinto zokuthambisa
ziyafumaneka I-wifi Engabhatalelwayo Yokomisa Iimpahla
Indawo yokupaka iindwendwe simahla, kwindawo yethu yokupaka kungekhona endleleni
Nceda, ukuba eli gumbi libhukishiwe, buza ngezinye. Amanye amagumbi ethu makhulu kodwa izinto onokuzisebenzisa ziyafana. IBayside Bed and Breakfast izama ukuqinisekisa ukuba uhlala kamnandi kwiholide yakho yaseNewfoundland.
Sinenye yezona ndawo zibalaseleyo kuyo nayiphi na iB&B kwiAvalon peninsula!
Ukususela kwilanga lethu elimangalisayo ukuya kwezona sunsets zinemibalabala, akukho vistas enokubonwa ukusuka kwi-The Bayside.
Idolophana entle yasePort de Grave iphezulu nje kwindlela apho abantu baseNewfoundland abasebenza nzima baqhubeka besenza isiko lokuloba. Bukela izikhephe zingena zize ziphume ezibukweni okanye uqhube uye ekupheleni kwepeninsula uze unyuke inqaba enesibane phezulu.
Yiya nakweyiphi na indlela uze umangalise ngakumbi eNewfoundland.
I-St. John 's iyure nje yokuqhuba, ngoko ukuba ufuna ukungcamla' isixeko esikhulu ', awunyanzelekanga ukuba uye kude.
Kodwa buya uze wonwabele ukuzola nobuhle obunikezelwa yi-The Bayside.
Kwabo balapha ukuze bahambe ngokuzola, sinezinto eziyimfihlo, ngoxa sihoya izicelo zakho.
Kwabo bafuna ukuhoywa, singakunceda ucebe uhambo lwakho, sicebise ngeevenkile zokutyela okanye sikuxelele ngeziganeko ezenzekayo kule ndawo.
Siyayithatha kuwe, undwendwe lwethu.
Kwabo bafuna ukuhoywa, singakunceda ucebe uhambo lwakho,…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Port de Grave (Bareneed)